समाचार Archives - Page3of6- Khabar Time
कोरोना बिरामी डिस्चार्ज भएसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई बधाई दिएका छन्। शनिवार कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित दोस्रो बिरामीको डिस्चार्ज भएको खबर थाहा पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यकर्मीलाई बधाई दिएका हुन्। ओलीले ट्वीटरमार्फत् डिस्चार्ज भएकी बिरामीको आरोग्यताको काम...
होसियार ! नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलाउन केहि समूह सक्रिय भएको आशंका
काठमाण्डाैं । कोरोना संक्रमण फैलाउन नेपालमा केही समूह सक्रिय भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । शुक्रबार जनकपुरमा केही पैसाले पैसा फाल्दै हिडेको घटनाबाट यस्तो आशंका गरिएको छ ।कोरोना फैलाउन त्यसरी पैसा फालिएको आशंका प्रहरीको छ । तर, त्यो पैसा सर्वसाधरणले टिपेनन् बरु प्रहरीलाई खबर गरेका छन् । प्रहरीले पैसाको प...
महाबिर पुनको एकपछि अर्को चमत्कार , नेपालमै बनाए कोरोना सँक्रमितलाई खाना लगिदिने रोबर्ट ! (भिडियो हेर्नुस)
राष्ट्रिय आ,विष्कार केन्द्रले कोरोना भा,इरस (कोभिड–१९) सं,क्रमितलाई खाना वा अन्य सामग्री पुर्‍याउनका लागि रोबाेट बनाउन सुरु गरेको छ । आइसोलेसन वार्डमा रहेका सं,क्रमित बिरामीलाई खाना पुर्‍याउने यो रोबाेट २–३ दिनभित्र तयार हुने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिए । ‘आइसोलेसनमा रहेका कोरोना स...
क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई दैनिक रु ५१० दिने सरकारको निर्णय
पोखरा, २ वैशाख । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को स ङ्क्रम ण न्यूनीकरणका लागि क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई खाना र नास्ताबापत दैनिक रु ५१० उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाना, नास्ताको लागि अबदेखि रकम उपलब्ध ...
फेसबुकमा अफवाह फैलाएको आरोपमा पत्रकार पक्राउ
वैशाख, वीरगञ्ज । सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा प्रहरीले मकवानपुरको हेटौंडाबाट एक पत्रकारलाई पक्राउ गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ४ बस्ने ३० बर्षका रवीन्द्र गौतमलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट खटिएको टोलीले मंगलबार हेटौंडाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । रवीन्द्रले भ्रामक खबर फैलाएर सामाजिक शान्ति...
बुद्धशान्ति गाउपालिकाको कोरोना राहतकोषमा शान्ति समाज सेवा समिति बाट रु १५००० प्रदान
बिस्वभर आक्रान्त बानाइ रहेको कोभिड १९ कोरोना भाईरसको महामारी को प्रभाव मा यतिबेला /शहर गाउ /बस्ती टोल हरुमा लकडाउन छ । जसको प्रभावले गरीब मजदुर हरुमा भोजन को संकट बड़दई गएको छ। गाउपालिका ले अवस्था हेरेर गरीब विपन्न ज्याला मज़दूरी गरी जिबनयापन गरी बाचनेहरुलाइ राहत वितरण गर्दै आएका छन । बुद्धशान्ति गाउपालिका भित्र भोक...
राजधानीमा कामदारकाे पीडाः कस्तो सरकार! न काठमाडौंमा खान दिन्छ, न घर जान दिन्छ
काठमाडौं। नागढुंगा नाकाको प्रहरी चेकपोस्टभन्दा केही तल दुईवटा मालवाहक ट्रक रोकिएका छन् । बाहिर मानिसको भिड मेला लागे सरह छ । अधिकाशंका काठमाडौंको कन्ट्रक्सन साइटमा काम गर्ने कामदारहरु हुन् । लगातारको लकडाउनका कारण खान नपाउने अवस्था आएपछि उनीहरु घर जान खोजिरहेका छन् । कोही नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बताउँछन त कोही वीरगञ्ज । ...
स्याङ्जाका युवाले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई खुल्लापत्र
सम्माननिय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू, यो सरकार र सरकारको कामकारबाहीको टिकाटिप्पणी गर्न उपयुक्त समय होइन।यो त विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि सरकारको काधमा काध मिलाएर सहयोग गर्ने बेला हो।तर, केहि दिनदेखि भारतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले नेपालको नाम जोडेर "नेपालबाट कोरोना फेलाउने संयन्त...
वितरण गरेको राहतको चामल नै यस्तो सडेको र ढुसी परेको भेटिएपछि…
यहाँको एक स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतको चामल सडेको र ढुसी परेको भेटिएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं ५ ले कल्चोक क्षेत्रका केही घरपरिवारलाई वितरण गरेको चामल ढुसीयुक्त छ । चामलको रङ कालो भएको र अमिलो गन्ध आएको राहत पाउने स्थानीयवासीले बताएका छन् । चामल तीनचार पटक पखाल्दा पनि कालो नगएको तथा एकदुई छाक पकाएर खाँदा...
काठमाडौं – कोरोना महामारी विश्वभर फैलिएको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। तर कोरोनाकै कारण नेपालमा कसैको ज्यान गएको भने पुष्टि भएको छैन। संक्रमण पनि नियन्त्रणमै छ। ९ जना संक्रमित देखिएकोमा एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने आठ जना आइसोलेसनमा छन्। तर विदेशमा रहेका नेपाली भने भाइरसबाट बढी प्रभावित भएका छन्। पछिल्लाे ...